Ngena kwi-Instagram ngaphandle kwekhowudi yokuqinisekisa Follow ➡️ Abalandeli Follow ➡️
NgoJanuwari 28, 2019 0 IiCententarios 10738
Iikhowudi zokuqinisekisa zinokuba yintloko yakho. Kuba, kunomdla ukuba le yingxaki Yande kwizicelo ezahlukeneyo. Ngaba le yenethiwekhi yoluntu eyaziwayo Instagram, inoluhlobo lwengxaki echaphazele abasebenzisi abaninzi, ababona indlela ivaliwe iakhawunti yabo ngaphandle kokwenza nantoni na. Kodwa kulungile zimbini iindlela ezilula Ukusombulula imeko yakho. Esokuqala kukungena Instagram ngaphandle kwekhowudi yokuqinisekisa kwaye okwesibini kukunyanzela ukufika kwekhowudi. Kuzo zombini iimeko iziphumo ziyafana. Kodwa kubalulekile ukuba uyazi ukuba Iikhowudi zokuqinisekisa azizinto zonke ezimbi.
Yintoni ikhowudi yokuqinisekisa?
Iikhowudi zokuqinisekisa zezi amacebo okhuseleko ezisebenzisa i-imeyile kunye namaqonga eendaba ezentlalo, ngokusebenzisa i-SMS for Nxibelelanisa i-akhawunti yakho nenombolo yefowuni. Ngale ndlela, ukuba umntu ufuna ukufikelela kwiiakhawunti zakho, ukongeza igama lakho eliyimfihlo (ukuba uyifumene) kuya kufuneka ukuba ube nefowuni yakho, ngaphandle koko awuyi kuba nakho ukufikelela kuzo. Kodwa ngamanye amaxesha ezi iikhowudi zokuqinisekisa, baba ngumqobo wokuba ne-Instagram yakho okanye nayiphi na enye inethiwekhi yoluntu.
Kutheni kukho iingxaki ngeekhowudi zokuqinisekisa kwi-Insagram?
Izizathu zoko zinokwenzeka zinokubakho inkqubo yo khu seleko yeqonga Instagram. Ukuba ngamanye amaxesha inxibelelanisa i-imeyile yakho kunye nezo iakhawunti esele ikho okanye ukuhambisa ulwazi olongezeyo. Kananjalo ingxaki inokuba yayivelisile ngokwakho, isazisa indlela engalunganga inombolo yakho yefowuni. Emva koko, uya kukhangela indlela yokungena kwi-Instagram ngaphandle kwekhowudi yokuqinisekisa. Kuzo zombini iimeko izisombululo ziyafana.
Kufanelekile ukuba uyazi, ukuba amalungelo amalungelo uqinisekiso nge-imeyile xa umsebenzi uyakrokrela kunye ngamanye amaxesha ukuthumela iikhowudi zokuqinisekisa Mhlawumbi abafikanga. Ukusombulula le ngxaki landela ezi ngcebiso.
Qinisekisa ukuba inombolo oyifakileyo ichanekile, ukuba kunjalo, qiniseka ukuba iyasebenza ukuze ufumane ikhowudi yokuqinisekisa. Ukuba ayisebenzi, zama enye inombolo onayo Ukuze wenze oku, kuya kufuneka utshintshe inombolo onayo kweyakho Iakhawunti ye-Instagram. Kucetyiswa ukuba iakhawunti yakho ivulwe kuyo ifowuni kunye nePC yale nkqubo.
Jonga kwifolda yogaxekile i-SMS, kungenzeka ukuba ikhowudi ikhona. Ukuba akunjalo, zama ukusebenzisa i Iikhowudi zokugcina owamkelayo xa Ndiyila iakhawunti ye-Instagram, oya kuthi uyifumane kwisimo sakho. Ukuba oku kuyasebenza kuwe, unako Ngena kwi-Instagram Akukho khowudi yokuqinisekisa.
Cima isixhobo kwaye utshintshe indawo okuyo. Ingxaki isenokuba yile ukuhambisa umqondiso.
Ukuba akukho nanye kwezi zinto zikhankanywe apha ngasentla isebenzile, zama ukwazisa i-Instagram ukusuka kwiziko loncedo, ukuze banokunika isisombululo.
Kodwa ukuba ufuna ukuyilungisa ngeendlela zakho Emva koko zama olu khetho lulandelayo.
Amanyathelo okufumana ikhowudi yokuqinisekisa
Kule meko kuya kufuneka usebenzise iphepha lewebhu ukufumana umyalezo ISMS, umnxeba Fumana iSMS kwi-Intanethi. Yeyiphi, ngokupheleleyo simahla kwaye ayifuni ubhaliso. Ukuba ukungena kwi-Instagram ngaphandle kwekhowudi yokuqinisekisa ayisosisombululo. Le nkqubo iza kukunceda, ukulandela la manyathelo.
Into yokuqala kukungena kwiwebhu ye Fumana iSMS kwi-Intanethi. Kanye ngaphakathi, uya kubona uluhlu amanani avela kumazwe awahlukeneyo kwaye ngokulandelayo, imiyalezo efunyenwe kwiiyure zokugqibela ze-24. Ngoku, cinezela ifowuni ephathekayo enemiyalezo engakumbi. Inethiwekhi iya kucebisa ukuba ukhethe inani elinemiyalezo embalwa, kodwa lisebenze kunye elineminye emininzi. Ukuba ayisebenzi kuwe, zama enye inombolo yefowuni, kuba inganxila de iphepha lingazihlaziyi.
Emva kokuba ukhethe, yiya kwiphepha lokwamkela imiyalezo, phezulu, uya kubona inombolo yefowuni. Khuphela kubandakanya uphawu "+"Xa uyenzile le nto, yincamathisele kwiwindows ebonisa Instagram kwaye cinezela "Thumela".
Xa inombolo yomnxeba ithunyelwe, i-Intagram iya kuqhubeka thumela ikhowudi yokuqinisekisa. Kuya kufuneka ubuyele kwiphepha lokwamkela imiyalezo kwaye uyihlaziye.
Ngephepha elihlaziyiweyo ungabona kwitafile engezantsi, imiyalezo yokugqibela efunyenweyo. Into elandelayo oza kuyenza kukukhuphela ikhowudi yokuqinisekisa ekhutshelwe ngu-Instagram, oya kuyifumana kwi ikholamu ye umyalezo. Umyalezo kufuneka uphakathi owokuqala. Ngokufanayo, qinisekisa ukuba inani leekholamu Ukusuka kwinani yiba yi-69988.
Ukugqibezela inkqubo, ncamathisela ikhowudi oyikopishe kwinyathelo elidlulileyo, kwiphepha apho i-Instagram icelayo kulo. Nje ukuba wenziwe, uya kuba akhawunti yakho ye-Instagram eqinisekisiweyo kwaye uya kuba nakho ukuyifumana ngaphandle kwengxaki.
Usenokuba nomdla woku Amagama afanelekileyo e-Instagram.
1 Yintoni ikhowudi yokuqinisekisa?
2 Kutheni kukho iingxaki ngeekhowudi zokuqinisekisa kwi-Insagram?
3 Ngena kwi-Instagram ngaphandle kwekhowudi yokuqinisekisa
4 Amanyathelo okufumana ikhowudi yokuqinisekisa
4.4 Khuphela ikhowudi
4.5 Cola ikhowudi
Khuphela iiNdaba ze-Instagram
NgoJanuwari 29, 2019
Yenza indawo ngokwezifiso kwi-Instagram